Todobo arimood oo haysta ciidanka qaranka – SOOMAALPEDİA
Bilihii ugu danbeeyay ayaa waxaa soo badanaayay Ciidamada Milliteriga Dowlada Somalia oo Gaadiidka iyo Hubka xiliga dagaalka u hibeynaaya maleeshiyaadka Al-shabaab.
Ciidamada Dowlada ayaa la ogaaday in wakhtiga kooban oo ay ku jiraan dagaalka aysan muujin dulqaad iyaga oo si ula kac ah uga carara Gaadiidka iyo Hubka, taasi oo lagu micneeyay inuu yahay heshiis u dhexeeya Saraakiisha Ciidamadaasi hogaamineysa iyo Al-shabaab.
Haddaba dayacnaanta Ciidamada iyo Fashilada is xigxiga ayaa waxaa sabab u ah qodobada soo socda:-
1- Ciidamada Dowlada oo wali u dhisan Hab qabiiil, taasi oo aan suuragalin karin inay u babac dhigaan maleeshiyaadka Al-shabaab.
2- Ciidamada oo aan la siin wax mushaar ah
3- Ciidamada ka dagaalama Gobolada oo u badan maleeshiyaadkii loo yaqiinay ”mooryaan garey”, taasi oo keentay inaan leyska xil
saarin guusha dagaalka.
4- Saraakiisha Ciidamada qaar oo aan qaadan xuquuqdooda oo xiriir hoose la leh Al-shabaab, kuwaasi oo xiliga duulaanka u reeba Hubka iyo Gaadiidka.
5- Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM oo aan ka dhaxeyn wax xiriir ah taasi oo sababta ugu weyn ah in Al-shabaab ay baacsato Ciidamada.
6- Saraakiisha iyo Ciidamada oo Al-shabaab ka iibsada Hubka noocyada culus.
7- Dowlada Federaalka, gaar ahaan Wasaarada Gaashaandhiga oo Ciidamada u deerisay, islamarkaana dhaqaalaha ku shubta Akoono qarsoodi ah.
Dhammaan qodobadaani ayaa waxa ay ku lamaan yihiin dhibta heysata Ciidamada iyo Habdhaqanka Madaxda Dowlada oo noqday mid aan garasho laheyn.
Posted in Categories, Dhiraandhiris, Politics